ထက်အောင်ကျော်| February 27, 2013 | Hits:8,015
16 | | “၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အလိုမရှိ၊ အလိုမရှိ”၊ “ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အလိုမရှိ”၊ “ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ အလိုမရှိ” စတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို အော်ဟစ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ (ဓာတ်ပုံ – ထက်အောင်ကျော်)
15 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Wah Moo February 27, 2013 - 3:13 pm	သတင်းတွေကိုဖတ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။
Reply	Jamada February 27, 2013 - 4:59 pm	Thank you Ko Htet Aung Gyaw
Reply	pps12345 March 1, 2013 - 10:01 am	ဦးနေဝင်း လက်ထက် တုံးကလည်း ဒီလိုပဲလေ။
Reply	Jamada February 27, 2013 - 5:04 pm	ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း နည်းနည်းလေး ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ ရခိုင်အရေးကို ဘယ်သတင်းစာက အစဖော် မီးမွှေးခဲ့ပါသလဲလို့ မေးချင်လို့ပါ။ နာရေးကြော်ငြာကိုတောင် မဟေဠိဖော်ရလောက်အောင် စေ့စေ့စပ်စပ် စိစစ်တော်မူတဲ့ အစိုးရသတင်းစာက စရေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ ကုလားလို့ တမင်ဖော်ပြပြီးမှ တောင်းပန်တာပါခင်ဗျာ။ ဒီ့ပြင်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒါမျိုးဆိုရင် တာဝန်အရှိဆုံးလူက တောင်းပန်ပြီး နုတ်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ခုတော့ ညွှန်ချုပ်က ၀န်ကြီးဖြစ်လာပါရောလား။
Reply	Sarpalin February 27, 2013 - 5:46 pm	Whyapolice was killed?And,what did you do for AB?And,Why r u in Norway?Want democracy or want to go and living in third country(oversea).Do you think Norway government trust your cheedote?
Reply	ြ့မန်မာပြည်သား February 27, 2013 - 10:23 pm	ဘယ်သူ မပြုမိမိပြုပါ။ ကိုယ် တိုင်ပြောင်းလဲမှ တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်နိုင်မှာပါ။
Reply	Ven. Pandita February 27, 2013 - 10:57 pm	ဆန္ဒပြတာကတော့ ပြခွင့်ရှိရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် “ရွှေပန်းနဲ့ ကြိုဆိုပါ၏” ဆိုတာမျိူးကျတော့ နည်းနည်း မလွန်ဘူးလား။
Reply	Thein February 27, 2013 - 10:57 pm	စာရေးသူသည်အစဉ်တစိုက် အဆိုြး­မင်ဝါဒနှင့်
Reply	မင်းကြီးညို February 28, 2013 - 4:02 am	အဲဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ပြည်တွင်းကိုလုံးဝ(လုံးဝ) ပြန်အ၀င်မခံပါနဲ့။ နောက်အစိုးရအဖွဲ့တက်
Reply	ကောင်းစေချင် February 28, 2013 - 7:54 am	ဆန္ဒပြတာကပြသနာမဟုတ်ပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့အကြမ်းပတမ်းလုပ်
Reply	R.zar February 28, 2013 - 10:19 am	ပါလီမန်ထဲ ရောက်လာတာနဲ့ တိုင်းပြည် ကပြည်သူတွေ ဆန္ဒ မပြရတော့ဘူးပေါ့။
Reply	Min Thuya February 28, 2013 - 11:20 am	Yes,He isareal Kachin leader..
Reply	joe February 28, 2013 - 4:10 pm	ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်ကိုဖေါ်ထုတ်တာဆိုရင် ၊ ကျွန်တော်တို.နိင်ငံမှာလူတိုင်း အလွှာအသီးသီး ၊ အဖွဲ.အစည်အသီးသီး လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပါ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်တွေ ၊ တပ်မတော်သားတွေ ၊ အလုပ်သမားတွေ ၊ အကုန်ဒီလိုဆန္ဒပြ လာရင် ဘာဖြစ်မလဲ ? ကိုယ်ဆန္ဒပြခွင်.ရှိသလို ၊ တခြားသူတွေလည်း ကိုယ်.လိုဆန္ဒပြခွင်.ရှိတယ်ဆိုတာ ကို ၊ ဆန္ဒပြနေတဲ.လူတွေနားလည်ဖို.လိုပါတယ်။
Reply	ရွှေမောင် February 28, 2013 - 7:31 pm	နိုင်ငံရပ်ခြားကနေပြီးတော့ မြန်မာပြည်အရေးကိုအစွမ်းကုန်ကျိုးပမ်းနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပညာရှိမျိုးချစ်များကိုအမေရိကန်အစိုးရကလုပ်ပေးသလိုဆုတစ်ခုလောက်ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ထွင်ပေးသင့်တယ်…နှစ်တွေလည်းကြာနေပြီ၊အစိုးရလည်းမလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ ရှေ့ တက်နေပြီ၊သူတို့ ရဲ့စတိုင်ကအရင်တုန်းကလိုမြန်မာအစိုးရအရာရှိလာရင်ဆန်ဒလေးပြလိုက်ထောက်ပံ့ငွေလေးယူလိုက်နဲ့ အားတော့ကျတယ် အစိုးရလည်း မိုက်ကန်းခဲ့တာလည်းလက်ခံပါတယ်…သူတို့ ကမြန်မာပြည်ရဲ့ပူံရိပ်ကိုအသုံးပြုပြီး သူများထောက်ပံ့ကြေးယူနေတာ မြန်မာပြည်အတွက် တစ်ခုခုမဖြစ်သင့်ဘူးလားအေရာဝတီရယ်… (ကျနော် ၂၀၀၈ ကတည်း ဒီဆိုက်ကို နေ့စဉ်နီးပါးကြည့်ပါတယ် မြန်ာပြည်အပြင်မှာရောအခုနောက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါ ဒီကအာဘော်တွေလည်း မှိုင်းမိသင့်သလောက်မိပါတယ်) အခုနောက်ပိုင်းမြန်ာမပြည်ကပညာရှင်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတို့ ကို အမြင်မကြည်တာအမှန်ပဲ တခုခုလိုနေသလိုလိုပဲ…ဘဆရာမိုးသီးတစ်ယောက်ကတော့ ဟော့နယူးမှာဓတ်ပုံခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ပါလိတွေရော ရောမခေတ်က ဖီလော်တွေရော ဟောနေလေရဲ့…နောက်ထပ်နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးသုခမ်ိန်တွေကို မျွှော်နေတယ်ဟေး….ပြောင်းတတ်သလောက်ပြောင်းတဲံသူလည်းပြောင်းနေပြီ နိုင်ငံခြားမှာ ခိုလှုံတဲ့သူတို့ ရဲ့အလုပ်ကဒါပဲလား…နောက်ထပ်ပိုတာက ဒီလိုလေးပဲတွေးတတ်တယ်ထင်ပါရဲံ…
Reply	dr.fg March 1, 2013 - 3:59 pm	ကျွန်တော်လဲ ဒီဆိုဒ်ကို အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ် တခုသတိထားမိတာက အပြုသဘောထက်
ဂေါဝိန်ပြောင်းရွှေ့မှု ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခြင်းဟု နော်ဝေ ပြောဆို
ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အချိန်ယူရမည်ဟု နော်ဝေ ဘုရင် ပြော
အခွန်လွတ် နော်ဝေ ဟောလီးဒေးနှင့် ဆက်ကြေးကောက် မြန်မာပြည်